Hutano, 06 Mbudzi 2019
Chitatu 6 Mbudzi 2019
Mbudzi 06, 2019
Varwere Voyaura Vari Muzvipatara zveHurumende
Apo hurumende iri kudzinga vana chiremba, varwere vakawanda muzvipatara zvikuru muguta reBulawayo vari kushaya rubatsiro sezvo madhokotera akawanda asiri kuenda kubasa.
Varwere Vokurudzira Hurumende Kusadzinga Basa Madhokera
Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musina madhokotera akakwana ari kuvarapa.
Mbudzi 05, 2019
Madhokotera Makumi Manomwe neManomwe Anodzingwa Basa
Sachigaro we Health Services Baord, Dr. Paulinas Sikosana, vanoti ichokwadi kuti vana chiremba ava vadzingwa basa zviri pamutemo sezvo vasina kutevedzera zvavanga vachitarisirwa kuitwa pose panenge pachinzwikwa nyaya dzakadai.
Akambove Mushamarari weZBC, Caleb Tondhlana Anoradzikwa kuWarren Hills
Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, Caleb Tondhlana, uyo akashaya kuSouth Africa nemusi weMuvhuro wapfuura, aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare.
Zimbabwe Yotarisana Nekupisa kweZuva Kwakanyanya
Zimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nekupisa kwezuva kunotyisa